जानकारी : पहिलोपटक हवाईयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? - ParyatanBazar.com
जानकारी : पहिलोपटक हवाईयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ?
पर्यटन बजार२ मंसिर २०७६, सोमबार मा प्रकाशित
मङ्सिर २, काठमाण्डौ । पहिलो पटक हवाई यात्रामा जादै हुनुहुन्छ भने थोरै कन्फ्युज हुनु स्वाभाविक हो। कतिपयलाई प्लेनमा यात्रा गर्दा ख्याल गर्नहुने/नहुने कुराहरुको जानकारी भएपनि कतिपयलाई भने जानकारी नहुन सक्छ त्यसैले पहिलो पटक हवाई यात्रा गर्न जादै हुनुहुन्छ भने सामान्य टिप्स तल दिएका छौ
-आवश्यक कागजात तयार पार्न नभुल्नुस्, पासपोर्ट या परिचयपत्र, हवाईटिकट, होटेल बुकिङ या स्पोन्सर लेटरजस्ता अत्यावश्यक कागजात सधैँ साथमा हुनुपर्छ ।
-लगेज तयार पार्नुहोस्, सबै कम्पनीले उत्तिकै तौलको लगेज बोक्ने सुविधा दिँदैनन्, त्यसकारण टिकट काट्ने समयमै प्लेनमा कति किलोसम्म सामान बोक्न पाइन्छ, त्यसअनुसार सामान प्याक गर्नुहोस् ।
-कतिपय सामान प्लेनमा यात्रा गर्दा ह्यान्डब्यागमा बोक्न पाइँदैन । जुनसुकै प्रकारको तरल पदार्थ, धारिलो वस्तु, पफ्र्युमजस्ता वस्तु पनि सुरक्षा जाँचमा ब्यागबाट निकालिन सक्छ ।
-टिकटमा उल्लेख भएको समयभन्दा केही पहिले नै एयरपोर्ट पुग्नुहोस् । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुई घन्टा अगाडि विमानस्थल पुग्नुपर्छ । बोर्डिङ पास, सुरक्षा जाँच, अध्यागमनजस्ता निकायको जाँच पार गरेपछि मात्र तपाईं जहाज चढ्ने स्थानसम्म पुग्नुहुन्छ ।
-सतर्क तर धैर्य रहनुहोस्, विमानस्थल व्यस्त स्थान हो । नहतारिनुहोस्, माइकबाट विभिन्न घोषणा भइरहेको हुन्छ, सुन्नुहोस् ।
कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो या अलमल भयो भने सोध्नुहोस्, सुरक्षाकर्मीले तपाईंलाई सहयोग गर्छन् ।
-उडानका दौरान तपाईंलाई कम्पनीको नियमअनुसार खानेकुरा दिइन्छ । पेय पदार्थ पनि उपलब्ध हुन्छ । यात्राका दौरान पाइने यस्तो सुविधाबारे सोध्नुहोस् र उडान कर्मचारीसँग त्यस्ता सुविधा माग गर्नुहोस्, तर याद गर्नुहोस्, जहाजभित्र छिरिसकेपछि पाइलट र उडान कर्मचारीको निर्देशन भने अनिवार्य मान्नुहोस्, त्यहाँ तपाईंले कुनै पनि जबर्जस्ती गर्न पाउनुहुन्न।
-जहाजबाट झरिसकेपछि सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन पास गर्नुपर्छ । त्यसवेला नडराउनुहोस्, भएका कागजात देखाउनुहोस्, सोधेका प्रश्नको निर्धक्कसाथ उत्तर दिनुहोस्, उनीहरूको नियम र निर्देशन पालना गर्नुहोस्